China ABS 3D HIFU vagadziri uye vanotengesa | Kunaka
Pakarepo maitiro ekusimudza kumeso, anti makwinya HIFU system
8 cartridges yechiso nemuviri
Menobeauty 11 Mitsara 3D HIFU kusvika parizvino ndiyo yakanakisa isingakuvadze nzira yekurapa yekusimudza kumeso, kurwisa kukwegura uye kuunyana kwemakwenzi kupfuura chero chimwe chigadzirwa.
Nheyo ye3D HIFU
1. MAX yekurapa nzvimbo yekupfura kumwe (kumeso & mutsipa): kureba 25mm * upamhi 1mm-10mm * kudzika 3.0mm & 4.5mm; MAX nzvimbo yekurapa yekupfura kumwe (muviri): kureba 25mm * upamhi 1mm-10mm * kudzika 8.0mm & 13mm .User anogona kugadzirisa paramende sekuda kwako. Hupamhi hwekupfura kumwe kwakakura kupfuura vamwe, saka haingopfupise nguva yakawanda yekushandisa HIFU muchina pane kumeso kumwe kana mutsipa kana muviri, asi zvakare kuita simba mapoinzi eganda ave akaenzana. uye zvirinani kurapa mhedzisiro.
Hupenyu hwakajairika nebasa hazvingafurirwe kana iwe ukatora nguva yacho
Pashure: Vertical kusangana nekutsi kwemukadzi hifu
Zvadaro: Focushape Slimming System